बैंकासुरेन्स किन रोकियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बैंकासुरेन्स सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै नै बहस र विवाद भइरहेको छ । बीमाको पहुँच बढाउन बैंकहरूले समेत राम्रो भूूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, त्यो बन्द भएपछि बीमा व्यवसायको पहुँच विस्तारमा असर पार्ने देखिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले साँच्चिकै बीमा गराएको थियो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै तोकेर बन्द गराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति निर्माण गरिन्छ । समग्र मुलुकको लागि बन्ने दस्तावेजमा बैंकहरूले बीमा कम्पनीहरूको एजेन्ट भएर काम गर्न पाइँदैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो त ?
बैंकलाई एजेन्सी बनाएर बीमा पोलिसी बेच्ने काम भर्खरै मात्र भएको होइन । पहिलेबाट नै बैंकहरूलाई संस्थागत एजेन्ट बनाएर बीमा पोलिसीहरू विक्री गरिन्थ्यो । बीमा कम्पनीहरूले केही बैंकहरूसँग संस्थागत एजेन्सीको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । हिजोसम्म नआएको कुरा आज कसरी आयो ? १८/१९ वर्षअघिका पुराना बीमा कम्पनीहरूले पनि बैंकलाई संस्थागत एजेन्सी बनाएर व्यवसाय गरेका थिए । यो व्यवसाय गलत थियो भने बैंक र बीमा कम्पनी दुवैको नियामक निकायले पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने थियो । वर्षौं वर्षअघिबाट चलिरहेको कुरालाई बन्द नै गराउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यो त बिरामी भएको मान्छेलाई उपचार गर्नुभन्दा सिध्याइदियो भने आनन्द हुन्छ भनेको जस्तो पनि भयो । यदि बीमा कम्पनीहरूले साँच्चिकै बीमा गराएका थिए भने यसले व्यवसायमा असर गर्दैन ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यो बन्द भएर त्यति असर गर्दैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग मात्र ५ लाखभन्दा बढी एजेन्सी फोर्स छन् । ५ लाख अभिकर्ताहरू जुन समयमा पनि जनताको घरघरमा नै पुगेर बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् । तर बैंक एजेन्सी भनेको संस्थागत एजेन्सी हो । बैंकको तलब खाएर बस्ने कर्मचारीले बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् । बैंकभित्र बसेर काम गर्ने कर्मचारीले बैंकको ढोकाभित्र छिर्ने मान्छेलाई मात्र बीमाको कुरा गर्छ । बिदाको दिन वा जनताको घरदैलोमा नै पुगेर त बीमा गराउँदैन । फरक यत्ति छ बैंकमा बीमा विक्री हुँदा ठूलो रकमका पोलिसी विक्री हुन्छन् भने अभिकर्ताहरूले ससानो रकमका बीमा पोलिसीहरू विक्री गर्ने हुन् ।
मानिसले बीमा बुझिसकेका छन् । तर आवश्यक पर्नेहरूले अभिकर्ताहरूसँग गएर पनि बीमा गराउँछन् । एजेन्सीहरू भएका बीमा कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ग्रोथमा खासै असर पर्दैन । तर, पनि बैंकासुरेन्सले बीमा विस्तारको लागि गरेको योगदान बिर्सनुहुँदैन ।
बैंकासुरेन्सबाट बैंकका ग्राहकहरूलाई बीमा गर्न सहज भएको थियो । बीमाका बारेमा थाहा पाएर पनि बीमा गर्न पछि हट्ने कतिपय ग्राहक बैंककै कारण बीमा गर्न पुगेका थिए । त्यसैले बैकासुरेन्सका सबल पक्षलाई ध्यानमा राखी यसलाई यथावत् राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।